June 13, 2020 - Khitalin Media
ကျတော်တို့ စားသုံးသူ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်တောင် ဂျင်းထည့်ခံနေရပြီလဲဆိုတာ ဖတ်သာကြည့်တော့ဗျာ…
June 13, 2020 Khitalin Media 0
​ခေတ်​ကိုက လဖက်​ညွှန့်​ဆိုပြီး ရာဘာရွက်​အညွှန့်​​တွေ ကို ချဉ်​ငံစပ်​လုပ်​မပုပ်​​ဆေး​တွေထည့်​ ဆီစိမ်​. ပုလင်းနဲ့ပိတ်​ပြီး တံဆိပ်​ကပ်​လိုက်​ရင်​တဆယ်​သား ၃၀၀တန်ရာဘာညွှန့်​တွေကတပုလင်း ၆၀၀၀ တန်​နာမည်​ကြီးလက်​ဖက်​ညွှန့်​ ​တွေ ဖြစ်​သွားတဲ့​ ဂျင်း​ခေတ်​. (လဖက်​စစ်​ မစစ်​ခွဲချင်​ရင်​ Leave margin entire ဖြစ်​မဖြစ်​နဲ့ခွဲရတယ်​.လဖက်​ ရွက်​အစစ်​ရဲ့ အနားသတ်​က နှင်းဆီ ရွက်​လို အထစ်​အထစ်​​လေး​တွေ […]
သင်၏ဘ၀ထဲကို ကံဆိုး မိုးမှောင်မှုတွေ ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေသော နမိတ်(၅) မျိုး
သင်၏ဘ၀ထဲကို ကံဆိုး မိုးမှောင်မှုတွေ ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေသော နမိတ်(၅) မျိုး တစ်ခုခုကို လုပ်တော့မယ့်အခါ မလုပ်သင့်ဘူး၊ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် နိမိတ်တချို့ပြတတ်သလို ၊တစ်နေရာရာကို သွားသင့်လား မသွားသင့်လား ဆိုတာလည်း သွားခါနီးရင် နိမိတ်လေးတွေ ပြတတ်ပါတယ်။ နိမိတ်ကိုယုံတဲ့သူတွေအတွက် နေရာတစ်နေရာသွားခါနီး၊တစ်ခုခုလုပ်ခါနီးမှာ ဖြစ်လာတတ်တဲ့နိမိတ်လေးတွေကိုသိပြီးရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
တရုတျ (၁၂) ကောငျဗဒေငျ အရမျးမှနျတယျနျော …
တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်… တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…1 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…2 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…3 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…4 […]
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယလူငယ် ဗေဒင်ဆရာ Abhigya Anand က နောက်ထပ် ‌ဟောကိန်းထပ်ထုတ်။ COVID-19 ထက်ပိုပြီးဆိုးဝါး ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းမည်ဟုဆို။ – လူတွေ ငတ်ပြတ်ကြလိမ့်မည်ဟုဆို :(> သူသည် လွန်ခဲ့သော ၇ လခန့်၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လကတည်းက ကမ္ဘာမှာ […]
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ
ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ ၃။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် […]
လုပ် ရက် လိုက် တာ…..လူနာေ တွ ကုပေးနေ တဲ့ ဆရာ ဝန် ဆရာမတွေ ကို မှ ပစ်မှတ် ထားရသလားဗျာ ဆရာဝန် ဆရာမတွေ အေးအေး ဆေးဆေး လူနာ ကြည့်ပါရစေလားဗျာ။ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီး ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန် ဆရာမ တွေ […]
ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၏ ဟောပြောချက်တွင် တညင်းသီးကို ဓာတ်ခွဲ သုတေသန ပြုကြည့်သောအခါ လူကို အကျိုးပြုသည့် မည်သည့် အဟာရမျှမပါဝင်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော ဖန်ချောင်းကဲ့သို့သော ကလာပ်စည်း များသည် ကျောက်ကပ်တွင် သွားပိတ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ စားသင့်သည့် အသီးမဟုတ်။ အတိုင်းအတာ […]
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့မိုင်းဖုန်းဆရာတော်
ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ အကြောင်းကို မိန့်ကြားလိုက်တဲ့မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ၁။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးဟာ လူသားပေါင်း သန်း (၁၀၀) ကျော်ကူးစက်ခံရမယ်။ ၂။ ၂၀၂၀ နဲ့ ၂၀၂၁. ခုနှစ် တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် အဆိုးဆုံးနှစ်တွေဖြစ်တယ်။ စီးပွားပျက်ကပ်တွေလည်းဖြစ်မယ်။ ဘုရားတရားမြဲကြပါ အဆိုးတွေလာမယ်။၂၀၂၂ မှ အကောင်းဘက်ပြန်ရောက်မယ်။ ၃။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် […]
မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ အားလုံး ဖုန်းအင်တာနက် အခမဲ့ သုံးရမယ့် အစီအစဉ်ကြီး ရောက်လာ တော့မည် . . .
မြန် မာနိုင်ငံ သားတွေ အား လုံး ဖုန်းအင် တာနက် အခမဲ့ သုံးရမယ့် အစီအစဉ်ကြီး ရောက်လာ တော့မည် ဂျပန်နိုင်ငံ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကိုယ်ပိုင် ဂြိုဟ်တုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်မည်ဖြစ်သည် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများမှ တီထွင်မည့်ဂြိုဟ်တု ကို Hokkaido […]
ငှကွေေးနဲ့ပါတျသကျလို့ သငျ့ဘဝတဈလြှောကျလုံး ဒုက်ခမရောကျစမေဲ့နညျးလမျး (၄)သှယျ (ကိုယျ့တှနေ့ညျးလမျးမို့ မြှဝပေေးတာပါ)
ငွေကြေးနဲ့ပါတ်သက်လို့ သင့်ဘဝတစ်လြှောက်လုံး ဒုက္ခမေရာက်စေမဲ့နည်းလမ်း (၄)သွယ် (ကိုယ့်တွေ့နည်းလမ်းမိျု့မှဝေပေးတာပါ) သင့်လက်ထဲမွာ ပိုက်ဆံမပြတ်အောင်သိထားသင့်တဲ့ အဖိုးတန်နည်းလမ်း (၄) မြိုး တစ်လတာ ဝင်ငွေကို စုမိဖို့နေနေသာသာ လကုန်ခါ နီးတာနဲ့ လက်ထဲ ငွေမေလာက်တာ မြိုး ကြုံ ကြိူက် ဖူးမွာပါ။ ဒါမြိုး မဖြစ်ဖို့ အတွက် […]